Madaxda Soomaaliyeed oo ka digtey jaridda geedaha - Sabahionline.com
Madaxda Soomaaliyeed oo ka digtey jaridda geedaha
Maajo 04, 2012
Guddoomiyaha Degmada Beled Xaawo ayaa ka digay jaridda sharci-darrada ah ee dhirta laga shito dhuxusha, waxan uu sheegay in $60 lagu ganaaxi doono kuwa ku xad-gudba dhirta, sidaana waa Khamiistii (3-dii May) sheegay Radio ay maal-galiso QM ee ee Bar-Kulan. Qodobbo la xiriira
Maraykanka oo Geeska Afrika u ballan-qaaday $58 milyan oo gargaar ah
$1.5 bilyan oo loogu baahan yahay si macaluul looga baajiyo Soomaaliya: Ergayga MA
Dhoofinta dhuxusha sharci-darada ah oo ay al-Shabaab ay ka hesho dhaqaale fara badan
Qaramada Midoobay oo sheegay in tiro ka badan 2 milyan oo Soomaali ah ay wali u baahan yihiin gargaar cunno
Guddoomiyaha Degmada Maxamuud Axmed Codweyne, oo sidoo kale ah xaakiin ka tirsan garsoorka degmada, ayaa u sheegay dad isugu soo baxay magaalada ku taalla soohdinta in maamulka Ahlu Sunna wal Jamaaca ay tallaabooyin adag ka qaadi doonaan qof walba oo lagu qabto isaga oo u jaraya dhirta in uu ka shito dhuxul uu ka sameeyo macaash.
Jaridda dhirta ayaa si ba’an u saameeysa bii’ada waxayna horseedi kartaa in ay macaluuli dillaacdo, ayuu sheegay raadiyuhu.
Qaramada Midoobay ayaa dhawaan meel-marisay qaraar lagu mamnuucayo in Soomaaliya laga soo dhoofiyo wax dhuxul ah. 80% dhuxusha Soomaaliya ayaa waxa loo dhoofiyaa dibadda, gaar ahaan waddamada Khaliijka. Muxuu kula yahay qoraalkan?